Hamro Yatra | » के हो ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ ? विदेशमा डिजिटल भ्याक्सिन पासको ट्रेन्ड बढ्दो के हो ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ ? विदेशमा डिजिटल भ्याक्सिन पासको ट्रेन्ड बढ्दो – Hamro Yatra
> के हो ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ ? विदेशमा डिजिटल भ्याक्सिन पासको ट्रेन्ड बढ्दो
के हो ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ ? विदेशमा डिजिटल भ्याक्सिन पासको ट्रेन्ड बढ्दो
काठमाडाैं, बैशाख २० । पछिल्लो समय सबै देशका सरकारहरु अस्थाइ उपायका रुपमा मानिसहरुले कसरी सजिलोसँग आफ्नो कोभिड अवस्था देखाउन सक्छन् भन्ने खोजी गरिरहेका छन् । अहिलेका लागि भने कोभिडको सुइ लगाएपछि प्राप्त गरिने कार्डमा सबै मेडिकल रेकर्ड विस्तृतमा लेखिएको हुन्छ । तर यसमा उनीहरु कोरोना नेगेटिभ भएको या संक्रमित भइसकेपछि प्राकृतिक इम्युनिटी प्राप्त गरेको हो जस्ता जानकारी राख्न पनि आवश्यक छ जसकै लागि ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ या ‘भ्याक्सिन पास’ बनाउने भनिएको हो ।
यसले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई सजिलो बनाइदिनेछ । यसलाई अर्को नाम ‘कोभिड पासपोर्ट’ पनि दिइएको छ । बेलायत सरकारले केही समय अगाडि आफूहरु स्कटल्यान्ड, वेल्स र नर्दन आयरल्यान्डसँग यो उपाय अपनाउने सम्बन्धी कुरा अगाडि बढाइरहेको बताएको थियो । उता अमेरिकामा चाहिँ खोप लगाए नलगाएको सुनिश्चित गर्ने मोबाइल एपहरु बढ्दो रुपमा सञ्चालनमा आउन थालिसकेका छन् । ती एपलाई ‘डिजिटल कोभिड पास’ का रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यसमा कोभिड सम्बन्धी आफ्नो डाटा देखाएपछि त्यही अनुरुप व्यक्तिलाई ठुल्ठुला कार्यक्रम या महत्वपूर्ण समारोहमा सहभागी गराइन्छ ।
अहिले नै थुप्रै प्राविधिक कम्पनीहरु, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र रिटेल स्टोर समेतले डिजिटल स्वास्थ्य पास निर्माण गर्नेमा काम गरिरहेका छन् । जस्तै न्युयोर्कमा मेडिसन स्क्वायर गार्डेन, खेलकुदका कार्यक्रम लगायत समारोहमा आइबीएमको ‘एक्सेलसियर’ एपको पास स्क्यान गरेर मात्र प्रवेश गराउन थालिएको छ । उक्त पासमा हामीले कोभिड नेगेटिभ भएको या खोप लगाइसकेको देखिएमा दर्शकका रुपमा उपस्थिति जनाउन सकिन्छ ।
यसरी खोप लगाइसकेको सुनिश्चित गराउने एपहरुले कोभिडका नियमहरु खुकुलो पार्नमा पनि मद्दत गर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तर यसले गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गर्ने सम्बन्धमा भने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । किनकी यसमा गुणस्तरदेखि व्यक्तिगत डाटा, विश्वसनीयता लगायत धेरै पक्षहरुको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म अमेरिकी सरकारले आफ्नो आधिकारिक पास स्थापित गराउनेबारे कुनै घोषणा गरेको छैन तर भ्याक्सिन पासपोर्टको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई मात्र दिनु समस्याजनक हुन सक्ने बताइएको छ ।
अहिलेका लागि भने मानिसहरुसँग कुन एप प्रयोग गर्ने भन्ने स्वतन्त्रता छ । हाल आइबीएम, माइक्रोसफ्ट, सेल्सफोर्स, ओरेकल, मायो क्लिनिक र कमन्स प्रोजेक्ट लगायतका भ्याक्सिन पासपोर्ट एपहरुले केही एयरलाइन्ससँग सहकार्य गरिरहेका छन् । यसमा सबैभन्दा जरुरी भनेको कसैको गोपनीयता भंग नगरिकन सबै सिमानाका सुरक्षाकर्मीले सजिलोगरी पढ्न र सुनिश्चित गर्न सक्ने कोभिड पास हुनुपर्ने हुन्छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय उडानका लागि अहिले नै सबै यात्रुले कोभिड नेगेटिभ टेस्ट भएको देखाउनैपर्ने नियम रहेको छ । र भ्याक्सिन पासपोर्ट या कोभिड पासले यसमा थप विवरणहरु राखि विदेशी भ्रमणलाई अझ सहज बनाइदिनेछ ।
युरोपियन अधिकारीहरुले यसअघि युरोपेली युनिअनमा ‘ग्रिन डिजिटल सर्टिफिकेट’ विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । यस अन्र्तगत कोभिड विरुद्ध खोप लगाइसकेका या कोरोना नेगेटिभ भएका अथवा भर्खर भाइरसबाट निको भएकाहरुलाई निर्धारित क्षेत्र भरि भ्रमण गर्न अनुमति दिइनेछ ।
यसअघि साइप्रसले बेलायतवासीहरुमा दुईवटा डोज खोप लगाइसकेकाले मे १ देखि बिना नेगेटिभ परीक्षण र बिना क्वारेन्टिन घुमफिर गर्न पाउने बताएको थियो । ग्रिसले पनि आफ्नो ‘ग्रीन’ डिजिटल सर्टिफिकेट मार्फत इजरायली पर्यटकहरुलाई भित्रिन दिने बताएको छ । उता डेनमार्क र स्वीडेनले पनि आफ्नै भ्याक्सिन पासपोर्ट निर्माण गरिरहेका छन् । बीबीसी र सीएनएनबाट